Friday April 21, 2017 - 09:07:47 in Somali News by Super Admin
DAWLADDA FARMAAJO OO KAMID NOQOTAY MAAMUL GOBOLEEDYADA. SHAQADA XILDHIBAANADA IYO SENATORS -KANA MEEL UGA DHACDAY!
Waagacusub.net - Shirkii Qeybsiga Kaluunka Tunada Badweynta Hindiya oo u dhaxeeyey wasiiradda Kaluumeysiga Maamul Goboleedyada iyo dowladda Dhexe oo Guuldarro ku soo dhamaaday!
Shirka ayaa wuxuu u socday Dowladda Dhexe iyo Shanta maamul Goboleed ee ka tirsan dowladda Dhexe, Shirka waxaa soo qaban qaabisay Hay'ada u qaabilsan Dowladda Mareykanka Kaalmada Dibadda(USAID) Shirka wuxuu furmay maalintii Isniinta, wuxuu ka furmay Hotel ku yaala Gudaha Airport.
Shirka wuxuu ku saabsanaa qeybsiga kaluunka Tunada ee Badweynta Hindiya, madaama 4 bilood oo keliya uu joogayo in warqada Rusqada ay dowladda Dhexe bixiso 5 Maamul Goboleed ay qaataan 70% halka dowladda Dhexe ay heli lahayd 30% afarta maamul Goboleed way ogolaadeen laakiin Maamulka Puntland ayaa diiday, waxay ku doodayaan qodobada soo socda:
1- In lagu qeybsado baaxada Badeed ee Maamul Goboleed kasta uu leeyahay Puntland waxay leedahay 750 km Badda dheerarkeeda dhanyahay, sidaas darteed waa in 20% nala siiyaa.
2-Rusqada ma bixin karto Dowladda Dhexe waayo nagama ahan ayey leeyihiin.
3- 30% uma ogolin dowladda Dhexe.
4-ma aqoonsanini Bangiga Dhexe ee Soomaliya. Kaas oo ahayd in lacagta la soo marsiiyo.
Shalay 2:00 markii la gaaray khubaradii shirka waday dalka way ka dhoofeen, Soomaalidii dhexdooda ayaa laga baxay, Markii la gaaray 4:30 waxaa shirka ku soo biiray Safiirka Dowladda Mareykanka u fadhiya Xamar, wuxuu isku dayey inuu isku soo dhaweeyo laakiin nasiibdarro waa lagu guuldareystay. Haddii ay heshiin lahaayeen shir kale ayaa wuxuu ka furmi lahaa Seychelles kaas oo lagu go'aamin lahaa heerka ka kaluumeysiga Badweynta Hindiya, kadib 1May waxaa la bilaabi lahaa Kaluumeysigii Soomaaliya waxay heli lahayd malaayiin Doollar.